Xildhibaan James Carver oo ka tirsan Baarlamaanka Midowga Yurub isla markaana laga soo doortay gobolka West Midlands ee UK ayaa shacabka iyo dawladda Somaliland ugu baaqay inay laban laabaan dedaalada ay ugu jiraan aqoonsi raadiska Somaliland. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Xildhibaan James Carver oo ka tirsan Baarlamaanka Midowga Yurub isla markaana laga...
Xildhibaan James Carver oo ka tirsan Baarlamaanka Midowga Yurub isla markaana laga soo doortay gobolka West Midlands ee UK ayaa shacabka iyo dawladda Somaliland ugu baaqay inay laban laabaan dedaalada ay ugu jiraan aqoonsi raadiska Somaliland.
Xildhibaan James Carver, oo waraysi gaar ah siiyay wargeyska Geeska Afrika iyo shabakadda wararka ee Somaliland Sun, wuxuu tilmaamay in istaraatajiyadii markii hore lagu raadin jiray aqoonsiga Somaliland, ahayd mid sax ah balse ay wakhtigan u baahantahay in la horumariyo maadaama oo ay arrimo badani is bedeleen.
Xildhibaan Carver, waxa kale oo uu sheegay inaanu ku qanacsanayn inay Somaliland wax u soo kordhinayaan madalaha la midka ah shirkii dhawaan lagu qabtay Hargeysa ee lagu casuumay saaxiibada Somaliland.
Mudane James Carver, wuxuu walaac ka muujiyay saldhiga milatari ee uu madaxweynihii hore Axmed-siilaanyo Imaaraadka Carabta ka siiyay magaalada Berbera, waxase uu talaabo muhiim ah ku tilmaamay maalgashiga dekedda Berbera, haddii buu yidhi la helo maalgashigii la balan qaaday. Waraysigaas aanu la yeelanay xildhibaan James Carver, wuxuu u dhacay sidan:
Shirkii dhawaan lagu qabtay Hargeysa ee aad ka qayb gashay oo lagaga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay Somaliland, siduu kuula muuqday?
Waxaay ila ahayd in shirku ahaa hawl qiimo leh. Waa arin waxtar leh mar kasta oo la soo bandhigo dhibaatada Somaliland haysata. Kuma qanacsani in madalaha kuwan oo kale ahi ay wax wayn u soo kordhinayaaan ololaha guud ee loogu jiro aqoonsi raadinta maadamaa oo dadka ka soo qayb galay ay guud ahaan yihiin kuwo taageersan arinka Somaliland.
Dedaalada la sameeyey 27kii sannadood ee u danbeeyey ee aqoonsi raadisku, ma yihiin kuwo midho dhalay?
Waxaan aaminsanahay in markii hore istiraajiyaddu ahayd mid sax ah. Haseyeeshee, su’aasha la is waydiin karaa waxaay tahay istiraajiyadii ma la sii horumariyay maadaama oo durufihii is bedeleen. Bulshada caalamku kuma dhegena dib u midaynta Soomaaliwayn- balse waxay ila tahay inay aaminsan tahay in arinku yahay mid Soomaalida u yaal. Waxa la odhan jiray Ingiriisku wuxuu noqon doono ka labaad ee Somaliland ictiraafa, balse waa in ka kowaad noqdo dal Afrikaan ah oo talaabada koowaad qaada. Haddii Midawga Afrika taageero waan hubaa inay jirayso taageero caalami ah. Haseyeeshee, waxay ila tahay inaynu hadda gaadhnay marxalad arinkan lagu xallin karo oo keliya heshiis toos ah oo ay wada gaadhaan Somaliland iyo Somaliya.
Arinka ah Somaliland inay la hadasho Ruushka iyo Shiinaha, waxaay ila tahay Somaliland waa inay la hadasho cid kasta oo gacan siin karta.
Maadaama oo aad inta badan u dooddo qaddiyadda Somaliland, madaxweynayaashii soo maray Somaliland maxaa horumar ah ee ay ka sameeyeen qaddiyadda aqoonsiga?
Waxaay ila tahay Madaxwayne kasta caqabado gaar ah ayaa soo food saara, dhamaantoodna wixii awoodooda ah ee khayraadka ay hayaan saamaxayay ayay sameeyeen.
Waa Maxay doorka ay Midowga Yurub iyo Ingiriisku ka ciyaari karaan horumarka Somaliland ee dhaqaale, amni iyo siyaasadeed?
Waxaay ila tahay Ingiriiska iyo Midawga Yurub way sii wadi doonaan inay siiyaan Somaliland taageero maaliyadeed iyo mid amni. Ma filayo in la arki doono mustaqbalka dhow dhaqdhaqaaq siyaasadeed. Ilama aha in ka bixista Ingiriisku ka baxay Midawga Yurub uu wax is bedel ah ku keenayo siyaasadda ku waajahan Somaliland- dawladda Ingiriisku way cadaysay in arinkani ahayn mid ay awood u leeyihiin inay ka go’aan gaadhaan ama ay ka go’aan gaadhi doonaan.
Sidee ayaad u aragtaa geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland iyo dib u dhaca ku yimaada doorashooyinkeeda?
Tani [su’aashani] waa mid adag. Waxa cad guusha laga gaadhay doorashooyinkii madaxtooyada ee hore u dhacay, iyo in si nabad ah ay xilka isugu warejiyeen Rayaale iyo Siilaanyo. Haseyeeshee, dib u dhigista doorashada Baarlamaanka ee March mudaysnayd waxaay waxyeelo u gaysatay sumcaddi Somaliland, waxaana loo baahan yahay in degdeg heshiis looga gaadho. Aragtidayda ku aadan xadidaadda tirada xisbiyadu waa arin micno samaynaysa.
Sidee ayuu kuula muuqdaa maalgashiga DP world ee dekedda Berbera?
Waxaay ila tahay heshiiske dekeddu waa mid faa’iido leh haddi maalgashigii la balan qaaday la helo. Waxaay sidoo kale ku xidhan tahay nooca maalgashiga. Waa arin fiican haddii ay sababto in maraakiib badani isticmaalaan Berbera. Qalab casri ah oo is wada oo badan (automation) wuxuu keenaa shaqo dhimis, markaa maadamaa oo dekeddu muhiim u tahay injiinka dhaqaale, waa muhiim in istiraajiyadda horumarku ay tahay mid faa’iido u keenta dadka deegaanka iyo guud ahaan dalka oo dhan. Dhaqaalaha Somaliland wuxuu u baahan yahay inuu abuuro fursado shaqo, gaar ahaan dadka waxbarashada dhamaystay, dekeduna waaa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan dhinacaas.
Waa maxay aragtidaada ku waajahan saldhiga Milatari ee Imaaraadka Carabta laga siiyay Somaliland?
Waxaan ka qabaa walaac. Ilama aha inay dani ugu jirto Somaliland in Berbera noqoto meel ciidan, islamarkaana ilama aha inay jirto taageero wayn oo loo hayo istiraajiyadda Imaaraadka iyo Sucuudigu ee dalka Yeman.
Qaddiyadda Somaliland, side ayay sharci ahaan kuula muuqataa?
Waxaanu ku marti-gelinay Barlamaanka Yurub shir lagaga hadlay arinka sharci ee aqoonisga. Mar qudha shaki igama gelin in sharciyan muran la gelin karo arinka. Haseyeeshee, arinkani maaha mid sharci ee waa mid siyaasadeed, waxaana lagu xallin karaa oo keliya taageero siyaasadeed. Ma hayo istiraajiyad ii gaar ah oo lagu gaadhayo aqoonsiga Somaliland. Waxaan u arkaa doorkaygu inuu yahay mid aan taagero ku siinayo dawladda iyo dadka Somaliland, iyo inaan siiyo fagaare ay ku dhiiban karaan dacwadooda. Ugu danbayntii, dadka reer Somaliland waa inay gudbistaan dacwadooda.
Previous articleDaawo Dhegayso Wasiirka Arimaha dibada somaliland oo Waraysi Dhinacyo badan Siiyay BBC
Next articleDoorashadii Waa laga reebay Musharax Roobow,Odayaasha Koonfur Galbeed oo wax ka yiri doorashada